Iincwadi Okukhethiweyo kweeList
Ezi zincwadi ezine zibhiyozela ubuhle kunye novuyo lwama-ballet kunye ne-ballerinas kunye namabali axelwa nge-ballet. Abaninzi babonisa kwakhona ukuba ibhaltshi iya kuba yinkalo ehlukeneyo kubathathi-nxaxheba bayo.
Yonke NgeBellerina Enhle
Isishwankathelo: Inkondlo uMarilyn Nelson uthetha ngqo kwi-African American ballerinas kunye nabantwana abancinci abafuna ukufana nabo, xa ebhala esithi, "I-Ancesters / ivelise i-swan." Nangona amazwi akhe ephoqeleka, iifoto ezimnandi zamalungu aseAfrika aseMelika yeMidlalo yeDaniso yeHarlem eyenza le ncwadi ibalulekileyo.
Kukho uvuyo olukhulu, ubabalo kunye nokunyakaza kwiifoto nguSusan Kuklin. Le yincwadi enokubongoza ukuba ifundwe ngokuvakalayo kwaye yabelane ngayo. I-ballerinas ebancinci iya kufuna ukujongana ngokugqithiseleyo kwimiba enomdla yabadansi abafanekisiweyo. Le ncwadi yenzelwe kakuhle kwaye iboniswe ukuba inokuchazwa njengencwadi "yetafile yekhofi," incwadi eboniswe ngezizathu zobugcisa. I-Beautiful Ballerina iya kuba nekhenkco ekhethekileyo kubantwana abancinci sele befunda i-ballet okanye bazimisele ukwenza njalo.
Umbhali: Umbongo onqobayo uMarilyn Nelson ukhethwa ngo-2013 ukuya kwi-six-yer term njengeSiKhansela we-Academy yaseMerika.
Umzekeliso: Umfuphi wezithombe uSusan Kuklin, umbhali kunye nomfaki-zithombe weencwadana zeencwadi kubantwana kunye nabantu abadala
Ubude: 32 amakhasi
Ifomathi: I- Hardcover
Kunconywe ukuba: Iiminyaka ezi-7 ukuya ku-11
Umshicileli: I- Scholastic Press, umshicileli weScholastic
Usuku lokupapashwa: 2009
Isongezelelo se-About.com: I- Ballet yabaqalayo
Ukudanisa: i-noveler's graphical novel - memoir
Isimemo nguSiena Cherson Siegel, eboniswa nguMark Siegel. Simon & Schuster
Yonke into malunga nokudansa: ibhola lomfanekiso we-ballerina
Isishwankathelo: Ingqwebo yokudanisa ibhekisela encwadini ngokuthi "inomfanekiso ocacileyo" kwaye "njengememori." Ngokwenene, imemori engumfanekiso-mfanekiso ( Yintoni imemori engumfanekiso? ). Ukudanisa ibali lamava kaSiena Cherson Siegal ngexesha leminyaka yokuqeqeshwa kwiSikolo saseMelika saseBallet.
USiena Cherson, owokuzalwa ePuerto Rico, kuqala uqala izifundo zokudanisa eneminyaka eli-6 xa ehlala eSan Juan, ePuerto Rico. Ngenkathi ehlala eBoston unyaka xa wayeneminyaka elithoba, uSiona wabona ibhola le-Meri Plisetskaya lenza kwi-Bolshoi Ballet yokuveliswa kweLake Lake kwaye wayesazi ukuba ufuna ukuba ibhola le-ballerina, naye.
Ezinye iiklasi zasePuerto Rico, ehlobo kwiprogram yasehlobo yase-American Ballet Theater, incwadi ethi A Young Young Dancer nguJill Krementz kunye ne-movie I-Children of Theater Street yonke ephefumlelweyo uSiena naphezu kokuba wayesazi ukuba ukufunda i-ballet yayinzima kakhulu .
Xa uSiena owayeneminyaka eyi-11 wamukelwa kwiSikolo saseMelika sase-American Ballet (SAB), intsapho yakhe yathuthela eNew York City. Ngenxa yempembelelo kaGeorge Balanchine kunye nabo bonke abaqeqeshi baseRussia kunye nabadlali bepianist, i-SAB ivakalelwa kakhulu njengeRashiya encinane kuneNew York City.
Njengoko iminyaka idlulile, uSiena wayejongene nokujongana novuyo kunye nentlungu ehamba nebholethi, kwaye ikhaya aliyisisiphephelo. Uyise, owachitha ixesha elide ePuerto Rico, yaye unina wasilwa naluphi na xa wayesekhaya kwaye ekugqibeleni, abazali bakhe bahlukana. Emva kweminyaka eyi-12 yokuqeqeshwa kwangaphambili kwe-ballet, uSiena wathatha isikhewu ukuya kwiYunivesithi yaseBrown. Kamva wabuyela kwibhalti.
Ifomathi kunye nomsebenzi kaMark Siegal zixabiso elihle. Imizekeliso ibonwabile kwaye ibonisa umsebenzi osebenzayo kaSiera kunye nobabalo obandayo, kunye nobunzima, kuquka ukulimala, njengoko ekhula njengomdaniso. I-palette ye-Siegal eguqulwayo, ukusetyenziswa kwayo kweebhanki zebhandi kunye nokubhala ngokubonisa ukutshintshela kunye nemifanekiso yakhe ecacileyo yehlabathi ye-ballet, emibini emva kwesigaba kunye nokusebenza, yenza amagama kaSiena Cherson Siegal aphile ubomi ngendlela engalibalekiyo.
Umbhali: Siena Cherson Siegal wabhala le ngongoma malunga nobuntwana bakhe beminyaka efunda ibhaltshi.
Umzekeliso: UMark Siegel wachaze le ncwadi ngendlela yesitayela somfanekiso usebenzisa i-watercolor neyinki. U-Siegali, umyeni kaSiena, ungumbonisi kunye nomqondisi wokuhlela weeNcwadi zokuQala zokuQala.
Amabhaso kunye nokuQaphela ukudanisa :
I-ALA Uluhlu lweencwadi zeBantwana
I-Robert F. Sibert I-Award Honoring Book
I-NCTE Iincwadi ezibonakalayo zeBantwana kwiiLwimi zoLwimi
Iincwadi zeeNcwadi zeThala leeNcwadi eziPhezulu zonyaka
Ubude: amaphepha angama-64
Ifomathi: Imemori yegraphic kwiincwadi ezibukhali, iphepha le-eBook
Kunconywe: Iminyaka eyi-8 ukuya kwe-14
Umshicileli: Atheneum Books for Young Readers, umxholo kaSimon & Schuster
Usuku lokupapashwa: 2006
I-ISBN: I- Hardcover ISBN: 9780689867477, Paperback ISBN: 971416926870
Uluhlu olongezelelweyo nge-About.com: Iiprogram zangaphambili ze-Ballet IiNkqubo
I-Firebird ngeBalerina Misty Copeland
Iqela lePenguin (USA)
Yonke Ngokuphathelele Umlilo Womlilo: IBalerina Misty Copeland Ubonisa Intombazana Encinci Indlela Yokudada Njenge-Firebird
Isishwankathelo: Ingqungquthela ephawulekayo ye- Firebird ibonisa i-ballerina Misty Copeland kwindwangu ebomvu ebomvu eyenziwa njenge-Firebird. Ingqwalasela yale ncwadi yanjengomxholo othi, uMisty Copeland ubonisa intombazana encinci Indlela yokuDada njengoMlilo .
Umbhalo weMisty Copeland, kodwa ulungelelwano oluvakalayo kunye novelwano, luboniswa ngemifanekiso enamandla yomdwebi uChristopher Myers, ebonisa ibhola le-ballerina ecebisa ibhola elincinci elincinci i-African American. Kwileta yakhe eya kubafundi ekupheleni kwencwadi, uCopeland ubhala malunga nokuba i-ballet ithetha ntoni kuye kunye nenkxalabo yakhe yokuba xa ekhangela iincwadi ze-ballet, akazange azibone. "Ndabona umfanekiso wento ebhalwe ngayo i-ballerina, kwaye wayengeyena mna, obomdaka kunye neetlanti ziqubuzela ubuso bakhe.
Umbhali: NgoJuni 2015, uMisty Copeland, umdanso we-ballet wase-American Ballet Theatre (ABT), wabizwa ngokuba ngumphathi oyintloko (dancer).
Umzekeliso: Umculi uChristopher Myers uzuze amanqaku amaninzi kwiincwadi zezingane zakhe, ezininzi zazo, ezifana nokuBheka Njengaye , zabhalwa nguyise uWalter Dean Myers .
Amabhaso kunye nokuKwazisa kweMilo-mlilo :
2015 ICoretta Scott King Illustrator Award
2015 uEzra Jack Keats I-Award Book Umlobi omtsha Hlonipha
Ubude: 40 amakhasi
Ifomathi: iincwadi ze-Hardcover ne-eBook
Kunconywe ku: Iminyaka emi-5 ukuya kwe-12
Umshicileli: Abantwana bakaGP Putnam, umxholo wePenguin Group (USA)
Usuku lokupapashwa: 2014
I-ISBN: I- Hardcover ISBN: 9780399166150
Isixhobo esongezelelweyo nge-About.com: Izinto ezi-8 ofuna ukuzazi malunga noMisty Copeland
Incwadi yeBarefoot yeBallet Stories
Konke malunga neBarefoot Book yeBallet Stories
Isishwankathelo: Incwadi yeBarefoot yeBallet Stories ibonisa imbali emfutshane yebhalethi yeklastiki ngendlela yexesha elichaziweyo kunye namabali asixhenxe ukusuka kwibhaltshi. Ngamanye amabali aqaliswa ngephepha leenkcukacha malunga nephepha leballet ibali.
Imizekeliso epheleleyo yemifanekiso kunye nemimiselo ehlotshisiwe izalisekisa amabali, ezinye zazo zisekelwe kwiingxelo zenkcubeko kunye neengxaki. Ngelixa abantwana bakho baqhelana namanye amabali kwiBarefoot Book yeBallet Stories , baninzi baya kuba batsha kubo. Amabali yiCoppélia: Intombazana ene-Enamel Eyes, i-Swan Lake, i-Cinderella, i-Nutcracker, i-Shim Chung: Indodakazi yomntu oyimpumputhe kunye no-Sleeping Beauty, kunye noDaphne noCloe.
Nangona isingeniso ngasinye sebali singabonakalisa umdla kubantwana abancinci kunye nabanye abatsha abakhulileyo abaneminyaka engama-8 nangaphezulu abanomdla kwi-ballet, amabali axelelwe kakuhle, kunye nemifanekiso yabo yothando, kufuneka bavelele umdla kubaphulaphuli abaninzi kubantwana kumabakala 1- 7.
Ababhali: UJane Yolen, obhale iincwadi ezinamakhulu angama-ana, uye wabambisana nentombi yakhe uHeidi EY Isampula kwiincwadi ezininzi zezingane.
Umzekeliso: URebcca Guay owadala imifanekiso yakhe yothando kunye ne-watercolor kunye ne-acryla-gouache ephepheni le-watercolor, uyaphumelela kwi-Pratt Institute kwisixeko saseNew York.
Ubude: 96 amakhasi
Ifomathi: Ukufundwa ngokugqithiswa ngebali leCD elandiswa nguJuliet Stevenson
Kunconywe: Iminyaka eyi-6 ukuya ku-12
Umshicileli: Barefoot Books
Izibonelelo ezongezelelweyo ngeAga.com:
Cinderella: Iifowuni ze-Intanethi
UMnumzana Engelbreit's Nutcracker , incwadi yezithombe ephindaphinda
Iingoma eziphezulu ze-Wave ezintsha ze-80s
Iincwadi eziphambili ze-Children's Cook Cookbooks
Iingoma eziphezulu ze-Top 10 Classic Rock Songs
I-80s Iingoma eziphezulu zokuzikhupha nokuzikhupha
13 Amanyathelo okumisa iSlideyi sehlobo
Konke malunga nee-12 zeeHarcules
Iingoma ezi-100 eziphambili zexesha lonke
Umkhokeli webhola wabaqeqeshi kwi-Daily Drills yoLwazi oluKhuselekileyo
Iiphonksi zokukunceda udibanise iiBlokhi njengePro
I-Doppler Impact for Waves Waves
Imihla ngemihla kunye neRoutines Lesson for Beginners